Julayi 25, 2020
Ukuba ujonga indawo yokuthenga i-Resveratrol powder ngobuninzi, inkampani enye onokuyithemba ngokungacacanga yokufumana izinto zokwenza izinto yiCofttek. Inkampani, ngenxa yeqela layo lophando olomeleleyo kunye nesebe lokuthengisa elizinikeleyo, iseke ubukho behlabathi lonke ngexesha nje elifutshane- inabathengi kunye namaqabane kwihlabathi liphela. I-resveratrol eveliswe yinkampani iza kwiibhetshi ezinkulu ze-25 kgs kwaye kunjalo ...
Izibonelelo ezi-5 eziPhezulu zokuthatha i-Phosphatidylserine (PS)
Ngokoluvo lwethu, i-Phosphatidylserine yeyona nto ilungileyo ikhoyo ngoku kwimarike yaseCofttek. Sibonisa izizathu zethu zokuxhasa olu khetho. Okokuqala, esi songezelelo sinika elona xabiso liphezulu lemali - kulwandle lweemveliso ezibiza kakhulu, le phosphatidylserine isongezelelo iwela kwicala elifikelelekayo. Okwesibini, oku kongezwa yiCofttek kwenziwa kwiziko elihloliweyo kwaye ke, umgangatho ...